RASMI: UEFA Oo Soo Saartay Shaxda Kooxdii Ugu Fiicnayd Kulamadii Wareega Saddexaad Ee UEFA Champions League-Ayaa Kooxdaada Ugu Jira? - GOOL24.NET
RASMI: UEFA Oo Soo Saartay Shaxda Kooxdii Ugu Fiicnayd Kulamadii Wareega Saddexaad Ee UEFA Champions League-Ayaa Kooxdaada Ugu Jira?
October 26, 2018 Mahamoud Batalaale
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa todobaad kasta oo la ciyaaro kulamada UEFA Champions League waxay soo saaraan shaxda kooxda ugu fiican ee laga soo xulay 11ka ciyaartoy ee boos kasta ugu bandhiga fiicnaada iyada oo lagu salaynayo qiimaynta iyo dhibcaha ciyaartoy kasta lagu helay UEFA Champions League Fantasy.
Kooxaha Barcelona, Juventus iyo Borussia Dortmund ayaa halkooda ka sii watay guulihii xidhiidhka ahaa ee ay xiil ciyaareedkan kaga soo jireen UEFA Champions League waxayna guuldaro soo gaadhay Man United halka Manchester City, Liverpool iyo kooxo kalena ay guulo muhiim ah gaadheen.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shaxda kooxdii ugu fiicnayd kulamadii wareega saddexaad ee heerka Groupyada UEFA Champions League ee uu xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA Soo saaray.
Goolhayaha kooxda FC Porto ee Iker Casillas ayaa wali muujinaya in ayna ka dhamaan wuxuuna ka soo muuqday shaxda kooxda todobaadka ee UEFA Champions League ugu fiican.
Saddexda difaaca ah ee shaxda kooxda todobaad ee UCL waxaa ku wada jira Laporte oo Man City gool uga soo dhaliyay kulankii Shakhtar waxaana kula jira Andy Robertson oo bandhig cajiib ah Liverpool uga sameeyay kulankii Red Star waxaana dhamaystiray Hakimi oo saddex gool caawineed ka sameeyay kulankii Dortmund ay xasuuqday Atletico Madrid.
Afarta khadka dhexe oo u habaysan difaac danbeedyo khadka dhexe ku xisaabsan ayay ku jiraan Jordi Alba oo kulankii Inter milan gool ka dhaliyay iyo waliba xidiga bandhiga fiican kulankii Dortmund iyo Atletico Madrid ka soo sameyay ee Raphael Guerreiro.
Waxaana khadka dhexe oo ku jira Mohamed Salah oo laba gool u soo dhaliyay Liverpool iyo xidiga kooxda FC Porto ee Corona.
Ugu danbayn waxaa weerarka shaxda kooxda todobaadka ee Champions League ka soo wada muuqday Edin Dzko oo aan gool dhalinta joojinayn kaas oo ay isku qiimayn yihiin Mohamed Salah waxaana weerarka kula jira Karmatic oo Schalke ka tirsan iiyo xidiga kooxda lyon ee Traore.
Shaxda Kooxda Todobaadka UEFA Champions League Ee La Soo Saaray Oo Dhamaystiran:
Haddaba akhriste, miyay jiraan xidigo aad shaxda kooxda todobaadka Champions League ka filaysay oo aan ka soo muuqan?